सरिता गिरी भन्छिन्– ममाथि षडयन्त्र भयो, अदालत जान्छु – Sanchar Patrika
July 7, 2020 202
समाजवादी पार्टीकी नेतृ तथा सांसद सरिता गिरीले आफूलाई साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी निष्काशन गर्ने पार्टी निर्णयविरुद्ध अदालत जाने बताएकी छन् । आफूलाई पार्टीले षड यन्त्र गरेर पदबाट हटाएको गिरीको गुनासो छ ।
‘अनुशासनको का रवाही गर्ने अधिकार केन्द्रीय समितिलाई मात्रै छ, यो अवैधानिक निर्णयलाई अदालतबाट चुनौति दिन्छु ।’
समाजवादी पार्टीले मंगलबार कारवाही गर्ने निर्णय गरेलगत्तै उनले भनिन्, ‘अनुशासनको का रवाही गर्ने अधिकार केन्द्रीय समितिलाई मात्रै छ, यो अवैधानिक निर्णयलाई अदालतबाट चुनौति दिन्छु ।’
भारतद्वारा अतिक्रमित नेपाली भूभाग लिम्पियाधुरासहितको नेपालको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा अनुसारको निशान छाप बनाउन गरिएको संविधान संशोधनका लागि संसदमा भएको मतदान गिरीले बहि स्कार गरेकी थिइन् । पार्टी निर्णय विपरीत उनले संविधान संशोधन विधेयकविरुद्ध संशोधन दर्ता गरेकी थिइन् ।
त्यसपछि पार्टी ह्विप उल्लंघन गरेको भन्दै उनलाई समाजवादी पार्टीको संसदीय दलले कारवाहीको सिफारिस गर्‍यो । समाजवादीका महासचिव रामसहायप्रसाद यादव नेतृत्वको कार्यदलले पनि गिरीलाई कार वाहीको सिफारिस गरेको थियो । कार्यदलको सिफारिसलाई पार्टी पदाधिकारी बैठकले अनुमोदन गरेको हो ।
पार्टी निर्णयबारे गिरीको धारणा उनकै शब्दमाःसञ्चार माध्यममा आएको कुरा सही हो भने यो सरासर मविरु द्धको षडयन्त्र हो । मलाई ह टाएर आफ्नो मान्छे ल्याउनका लागि यस्तो षडयन्त्र रचिएको हो
औपचारिकरुपमा केही जानकारी पाएकी छैन । सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालबाट कारवाही गरेको सूचना पाएकी छु । सञ्चार माध्यममा आएको कुरा सही हो भने यो सरासर मविरु द्धको षडयन्त्र हो । मलाई ह टाएर आफ्नो मान्छे ल्याउनका लागि यस्तो षडयन्त्र रचिएको हो ।
जुन संशोधन प्रस्तावलाई लिएर म माथि कार वाही भएको भनिएको छ, त्यसबारे मैले पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र उपाध्यक्ष रेणु यादवलाई जानकारी गराएकी थिएँ । यो विषयमा मैले संसदीय दल र संसदमा छलफल गर्न पाइनँ । संसदीय दलको बैठक मतदान हुने दिनमा मात्रै राखियो ।
संसदीय दलमा प्रस्ताव फिर्ता लिनुस् अनिमात्रै छलफल हुन्छ भनियो । सभामुखले पनि मेरो प्रस्ताव कार्यसूचीमा राख्नुभएन । कार्यसूचीमा नराख्नका लागि मसँग परामर्श पनि गर्नुभएन । जब कि संसदको नियमावलीअनुसार कार्यसूचीबाट हटाउँदा संशोधनकर्तासँग छलफल गर्नुपर्दथ्यो ।
नक्सामा मेरो विरो ध होइन । प्रमाण खोजौं भन्न खोजेकी थिएँ । सन् १८१६ को सुगौली सन्धिअनुसार भन्ने कुरा मात्रै राखेको भए पनि हुने थियो । प्रमाण खोज्ने समिति गठन गरेर सरकारले नै मेरो कुरा सही रहेछ भन्ने प्रमाणित गरिसकेको छ । मैले त्यो भन्दा बढी केही पनि भन्न खोजेकी होइन ।
फरक धारणा राख्नै नपाउने भएपछि त सांसद हुनुको पनि के अर्थ भयो र ?सांसदद्वय अमृता अग्रहरी र सूर्यनारायण यादवले पनि मतदान बहिस्कार गरेका हुन । त्यो दिन सांसद यादव संसदीय दलमा उपस्थित भएको प्रमाण मसँग छ
पार्टी एकीकरणपछि जनता समाजवादी पार्टी दर्ता प्रक्रियामा छ । हरेक काम संयुक्त निर्णयबाट भइरहेका छन् । तर, मलाई हटाउने निर्णय समाजवादी पार्टीले मात्रै गर्‍यो, किन ? अनुशासनको कारवाही गर्ने अधिकार केन्द्रीय समितिलाई मात्रै छ । तर, मलाई पदाधिकारी बैठकले कारवाही गरेको कुरा आएको छ । यो विधान विपरीत छ । यसलाई म अदालतमा चुनौती दिन्छु ।
अर्को कुरा त्यो दिन संविधान संशोधनको पक्षमा भोट नहाल्ने सांसद म मात्रै होइन । सांसदद्वय अमृता अग्रहरी र सूर्यनारायण यादवले पनि मतदान बहिस्कार गरेका हुन । त्यो दिन सांसद यादव संसदीय दलमा उपस्थित भएको प्रमाण मसँग छ । अमृता अग्रहरी पनि जानाजान अनुपस्थित हुनुभएको हो । स्राेतः अन्लाइन खबर
Prevहङ्‌कङबाट टिकटक हट्ने, अमेरिकाले पनि प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने
Nextके तपाईंको एनआइसी एशिया बैंकको कर्जामा ९.९९ प्रतिशत भन्दा बढी ब्याजदर छ ?
काठमाडौंको रहस्यमय मन्दिर दुध खादा काटियो भगवानको टाउको – काट्नेकै सन्तान आज सम्म पूजारी यस्तो श’क्ती(भिडियो)